Su'aal laga keenay Wiilkii Afrikaanka ahaa ee dhalashada Faransiiska lagu siiyay canug yar uu bad baadiyay | Allbanaadir News
Su’aal laga keenay Wiilkii Afrikaanka ahaa ee dhalashada Faransiiska lagu siiyay canug yar uu bad baadiyay
Hadii aadan haysanin sharciga dalka Faransiiska oo aad doonaysa inaad qaadato dhalashada dalkaasi way kuu fudud tahay.
Mamoudou Gassama ayaa dhawaan wacdaro dhigay, waxaa laga doonaya ayaa ah inaad soo bandhigtid arrimo khayru caadi ah.
Marka ma ahan inaad si fudud ku heshida sharciga Faransiiska balse waa arrin ku xusan dasturka dalkaasi.
Arrintaasi ayuu raacayay madaxweyne Macron markii u mahad celinayay ninkii da’da yaraa ee reer Mali ee dhawaan soo badbaadiyay canug yar oo ka laaladay dhismo.
Madaxweynaha ayaa sheegay Mamoudou Gassama in sharciga dalkaasi lagu guddoonsinaya arrintaas darteed.
Faransiiska ayaa u furan fikaradda ah inuu dhalashada dalkiisa sharaf ahaan u bixiyo sii loo qaddariyo ajaanibta sameeyay waxyaabo khayru caadi oo ku xusan mabaadi’idaasi.
Markii uu jiray kacdoonkii Faransiska waxaa jiri jiray, sharci dhigaya in dhalasho la siiyo dadka kusoo caanbaxay qoraallada xornimo u dirirka, kuwaaso kamid ahaa George Washington iyo Thomas Jefferson.
Sanadkii 1870-kii, dadkii Faransiiska uga qayb qaatay dagaalkii ay kula jireen Jarmalka ayaa ka faa’idaystay inay dhalashada helaan, intooda badana waxay ahaayeen muwaadhiniin reer Jarmal ah.
Dadka ajaanibta ee ka qayb noqonaya ciidammada Faransiiska ayaa la guddoonsiiya dhalashada dalkaasi waa haddii ay dagaal ku dhaawacmaan, maanta oo Faransiiska uu 150 dal ka qoranaya 8,600 ciidan ayaa sanadkiiba 200 ciidan oo kaliya ah ayaa helaya sharciga.
Dhammaan siyaabooyinkaasi lagu helaya dhalashada Faransiiska waxay ahayd ka hor intii muhaajirinta badaan aysan jirin, maanta xaaladda sidaasi ma ahaan.
Boqolaal kun oo muhaajirin da’ yar ayaa ku sugan Faransiiska sida Gassama oo dalkaasi gaaray kaddib markii ay soo galeen safar dheer oo khatar ah, mana haystaan dhalashada dalkaasi, nolol adag ayay ku jiraan.
Dhammaan waxay ku hami qabaan inay raacaan tusaaladii Mamoudou Gassama.
Go’aanka madaxweyne Macron ayaa hadal hayn ka dhaliyay dalka Faransiiska.
Runtii dadka Faransiiska intooda badan waxay qabaan in Gassama uu badbaadiyay canuga uuna sameeyay arrin khayru caadi ah oo u horseeday inuu la guddoonsiyo dhalashada.
Dadka qaar ayaa u haystaa go’aanka madaxweynaha mid aan joogto ahayn.
Dadka dhaleecaya siyaasadda madaxweyne macron ayaa isweyddinaya in deeqsinimada madaxweynaha ay sidoo kale gaari doonto dadka sharci la’aanta u ah gudaha dalkaasi.
Qodobka 19 ilaa 21-aad ee dastuurka dalka Faransiiska ayaa dhigaya inay suurto gal tahay in dadka ajaanibta ay heli karaan dhalashada dalkaasi waa haddii ay soo bandigaan waxyaabo khayru caadi ah oo dano uga jirto dalka Faransiiska.
DINGIIN GAASKA WUXUU QATAR GALIN KARAA NAFTAADA DAAWO MUUQAALKA